Ndezvipi zvakanakira ultrasonic Welding?
Nekukurumidza kukurumidza kwekugadzirwa kwemaindasitiri, mapurasitiki anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzehupfumi hwenyika uye hupenyu hwevanhu nekuda kwekunakira kwavo kurema kurema, yakasimba simba, kurwisa ngura uye nyore kugadzirisa. Ultrasonic nomoto anogona kusangana zvinodiwa siyana S ...Verenga zvimwe »
Iyo Core Ultrasonic zvikamu zveMask Kugadzira Machine
QRsonic inyanzvi yekugadzira inoshanda mukutsvagisa uye kugadzirwa kwesimba-simba ultrasonic transducers. Zvigadzirwa zvikuru zvekambani ndezvekutengesa uye magetsi emagetsi. Pakati pavo, 15k uye 20k ultrasonic transducers uye magetsi zvinoshandiswa zvakanyanya sekiyi co ...Verenga zvimwe »
Nzira yekusarudza Ultrasonic Transducer?
Sezvo isu tichiziva, ultrasonic transducer iri mhando yesimba kushandura chishandiso. Basa rayo kushandura simba rekupinza remagetsi kuita echimakanika simba (ultrasound) uye wozoendesa kunze, uye inoshandisa chidimbu chidiki chesimba (isingasviki 10%). Naizvozvo, inonyanya kukosha kufunga nezve choo ...Verenga zvimwe »